सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर
सार्वजनिक व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर
Posted by: युगबोध in विचार May 15, 2018	0 86 Views
यतिबे ला घो राही बजारका ठूला घर जतिमा माओ वादी ने ताको नाम जो डिने गरे को भे टिन्छ । अलि बढी कृष्णबहादुर महरा र जनार्दन शर्माका नाम गतिला भवनहरुमा मनमनै लगे र टा“स् छन् । त्यसबाहे क अरु ने ताहरुका नाम पनि ठूला घर, हो टल, उद्यो गलगायतमा फलानाको हो अरे भने र आउछन् ।
नटुक्रिदासम्म माओ वादीहरु अरु दलका ने ता कार्यकर्तालाई प“ूजीपति, दलाल, भ्रष्ट, यस् तै कुबाच्यले धारे हात लगाउथे  । फुटे पछि आपसमा त्यही शब्द र वाक्यले टिकाटिप्पणी गर्न थाले का छन् । ने कपा क्रान्तिकारी माओ वादीबाट ने कपामा टुक्रिदा झन् के ही ने ताका घरमा भ्रष्ट र दलालका नामले भित्ते ले खन गर्न भ्याए । दलाल शब्दले तिनै लाई अपमानित गरे जसलाई कमरे ड भने र लामो समय मुठी उठाएका थिए । आफ्नो खास अभिभावक भने र सम्बो धन र संरक्षण गरे का थिए ।
सर्वसाधारणले न ने ताका घर ठम्याउन सके का छन् न त दलाल नै किटान गनेर् मे सो पाएका छन् । चियागफमा कसै ले ‘हो रे ’ भन्छ अरुले त्यसै मा हो न हो थप्छन् । हो इन भन्ने हरु पनि छन् । तर तिनीहरु अल्पमतमा पर्छन् । बहुमतै भए पनि शंका गनेर् ले पत्यार मान्दै न । शंका गनेर् स“ग पनि कुनै आधार छै न । यस् ता हल्लाको बहसले तनाव थप्छ । सुगर र मुटु रो गका विरामी बढाउ“छ । अनाहकमा मान्छे को ज्यानै जो खिममा परे को छ । सत्य कुरा दिन सक्ने कुनै व्यवस् था छै न ।
के ही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा ने पालका राष्ट्रपति विद्यादे वी भण्डारीले हरे क कार्यक्रममा नया साडी लगाउने गरे को समाचार सार्वजनिक भयो  । एकै दिन दुई तीनवटा कार्यक्रममा जानु परे पनि फरक साडी चाहियो  । यसले कुनै सम्भ्रान्त वर्गको मात्रै झल्को दिएन । एउटा विलासी दे शको अगुवा भने र प्रचारित भयो  । गरिब मुलुकका सिकारु राष्ट्रपतिले ख्याल गनैर् पर्छ । त्यो पनि क्रान्तिकारी पार्टीको पूर्वने ता भएकाले पनि कस् तो चलन बसाल्ने भन्ने जिम्मा उहामा छ । उहा“ले दे शको घा“टी हे री हाड निल्नुपर्दछ । त्यो अनावश्यक चटक दे खाएर फुर्मासी गर्नुहुन्न ।
यो दे शका प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति कति छ ? जवाफ दिने निकाय छै न । गृहमन्त्रालयमा जानको लागि पार्टी र ने ताहरु मरिहत्ते गर्छन् । त्यहा लुट्न पाइने र मस् ती हुने भनाइ छ । आफू पुग्दा ठीकै लाग्ने । अकोर् लाई पठाउ पार्टीलाई गाली गदैर् भड्किने ने तागणहरु दे खिए । जुन पार्टीको त्यहा पुगे पनि थिति बसाल्न सके नन् । लुट्न जाने पालो मात्रै पर्खिए । अकोर् पुग्दा फटाहा, सामन्त भन्ने ले आफू पुग्दा किन सुधारे नन् ? जनताले जवाफ खो जे को छ । पद बहाल हुदा र निस् कदाको अवस्था ने पाल सरकारको रे कर्डमा राखे को भए यो समस्या आउने थिएन । कति बढ्यो थाहा हुन्थ्यो  । यहा“ ने ता, पार्टी, डन, चो र, ठग कसै को सम्पत्तिको विवरण रह“दै न ।
चो रीका सवारी साधन सडकमा गुड्दा प्रहरीले छो प्यो भने खुल्छ । अहिले चल्तीमा आएको शब्द से टिङ मिलायो भने दर्ता बिनाका सवारी साधन मजाले चलाउन पाइन्छ । कुनै पद प्रतिष्ठाले प्रचारित व्यक्ति हुनुपर्छ । उसको सवारी साधनको ब्लुबुक मात्रै हो इन चालक लाइसे न्स पनि नवीकरण गर्नुपदैर् न । यसरी व्यक्ति हावी हुने शै ली छ । नीति दे खाउने दाह्रा मात्रै हुन्छन् । निरीहलाई दबाउने हतियार बन्छन् । बलियाका लागि र शक्ति सत्ताको पहु“चमा रहने लाई के ही पर्वाह छै न ।
कसै को लाखौ ं रकम हराउ“छ भे टिदै न । हराउने वाला स्रो त नखुले को सम्पत्तिका नाममा अपराधीमा दर्ज हुन्छ । चो र्ने व्यक्तिले मज्जाले उडाउ“छ । किनभने उसले खाएको , लाएको , हिडे घुमे को बिल बनाउ“दै न । कसले कति खर्च गरे को भन्ने राज्यस“ग कुनै रे कर्ड रह“दै न । महंगा गहना किन्दा समे त भ्याटबिल हुन्न । चो रीका सुन किन्न पाइन्छ । अरु लत्ता कपडा र सजावटका सामानमा पनि बिल हु“दै न । अण्डर विलिङबाट आएको सामानको भ्याट बिल पाइ“दै न । जति खर्च र फुर्मासी गरे पनि कसै ले थाहा पाउ“दै न । यस् तो अन्धाधुन्ध तरीकाले दे श चले को छ ।
ने तालाई गृह र अर्थ जस् तै कर्मचारीलाई भन्सार मनपर्छ । उसले त्यहा“ किन रो ज्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यापारीहरुस“ग छ । व्यापक अण्डरविलिङ हुन्छ । के ही रकम कर्मचारीलाई बुझाइन्छ । थो रै बिलमा दे खाएर ठूलो परिमाणमा सामान भित्रिन्छ । त्यसरी घुसको रुपमा खाएको रकम दे ख्ने निकाय छै न । बरु एकै चो टि कुनै बे ला उजुरी परे पछि यतिका सम्पत्ति कसरी आयो भने र प्रश्न उठाइन्छ । यो जिल्लामा गनिएका भ्रष्टचारी स् व. खुमबहादुर खड्का थिए । उनको कमाएको सम्पत्तिमा प्रश्न उठाइयो  । एउटा मन्त्रीको घरमा सिष्टमबिना कसरी पै सा आयो ? खो जिएन । राज्यको कुन शीर्षकको बजे ट हिनामिना गरे यसको जवाफ कसै सग छै न । धे रै कमाएपछि रिसले भ्रष्टाचारको मुद्दा हाले को जस् तो मात्रै दे खियो  । स्रो त नखुले को नाममा कारवाही भयो  । उसो भए बाहिर नदे खाउने लुकालो र अरुका नाममा धन राख्ने भ्रष्ट हो इनन् ?
अहिले सम्म जो –जो भ्रष्ट छन् उनीहरु कसरी भए कतै पनि अनुसन्धान गरिएको छै न । एक दुई लाखको बाटो , कल्भर्ट नाला बनाउ“दा कर्मचारीले उपभो क्तालाई खुबै दुःख दिन्छन् । कागजी प्रक्रिया पु¥याउने नाममा रुवाउनसम्म रुवाउ“छन् । बाटो को ट्रयाक खो ल्न दुईलाख बजे ट पाएका घो राही–१८ खरकट्टीका दिने श ओ ली अब यो जना कहिल्यै माग्दै न भन्नुहुन्छ । घो राही उपमहानगरपालिकाका के ही कर्मचारीले सताउनु सताए । चार सय २५ मिटरको बाटो लाई सात सय बनाएर स् िटमे ट गरिदिए । यस् ता असक्षम कर्मचारी भर्ना गरे को उपमहानगरपालिकाले पछि अरु बहाना लगाएर चार महिना सतायो  । अन्तमा उपमे यर सीता न्यौ पाने ले समस् या हल गर्नुभयो  । आफ्नै डो जर, टिप्पर भएका कर्मचारीले अरुको चलाए निहु“ खो ज्छन् भन्ने बुझाइ उपभो क्तामा परे को छ । यस् तै विषयमा सूर्यनाथ सापको टाले दीपशिखा नजिकको बाटो बन्दाको प्रसंग समे टी सडकको कथा नामक पुस् तक ले ख्नुभएको छ ।
जनताको काम गर्दा अने कथरि प्रमाण खो ज्ने कर्मचारीहरु ने ता मन्त्रीहरुलाई कसरी ठूलो रकम व्यवस् था गरिदिन्छन् ? जिब्रो टो क्ने गरी हुने गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र सुन तस् करीका ठूला–ठूला काण्ड भएका छन् । कुनै ठाउ“मा पनि मन्त्री जो डिदै न । प्रहरी र अन्य कर्मचारीको जागिर गएको छ, जे ल बसे का छन् । तर उनीहरुका भन्दा धे रै बढी सम्पती मन्त्रीले थुपारे को सार्वजनिक हुन्छ । यो अनौ ठो कसरी भएको छ ? जनताले जवाफ खो जिरहे का छन् । एउटै पार्टीमा लामो समय काम गरे काहरु छुटिन्छन् । तिनले पनि पुरानो पार्टीलाई भ्रष्टको आरो प लगाउछन् । समस् या समाधानको उपाय फुट्नु हो इन, सिष्टम पत्ता लगाई समाधान गर्नु हो  । एउटा व्यक्तिको ठाउमा अकोर् पठाउदै मा समाधान हुदै न । हुन्थ्यो भने हरे क परिवर्तन पछिका नया“ सरकार झन् भ्रष्ट बन्दै नथे  । जनआन्दो लन २०४६ पछिका सबै सरकार क्रान्तिकारी हुन् । व्यवहारमा को ही दे खिएनन् ।
सरकारले खो ज्दाका बखतमा भे टाउन सके जति कानुनी हो  । नत्र भने कानूनविपरीत अबै ध मान्नुपर्छ । सबै को प्यान नम्बर हुनुपर्छ । कर तिर्नुपर्छ । व्यवसायको विवरण कम्प्यूटरमा राखिनुपर्छ । उसका खरीद र बिक्री बिलबाट सबै कुरा पत्ता लाग्छ । जागिर खाने हरुले मात्रै कर तिर्छन् । ऋण लिने हरुले आयस्रो त बढाएर दे खाउ“छन् । जसलाई बंै कबाट ऋण लिनुछै न उसले सबै कमाइ लुकाउ“छ । यसको मतलब गरिवले कर तिरिरहे को छ । पू“जीपतिहरुले राज्यलाई ठगिरहे का छन् । त्यही ठगे को रकमबाट चन्दा, उपहार, घुस, चुनाव खर्च दिन्छन् र भ्रष्टचारी बढाएका छन् । ने ताहरु धनी बनाउने , विलासी बनाउने यो दे शका ठग र करछली गनेर् हरु हुन् ।
दे शमा समाजवाद ल्याउन स् थापना भएको दुई ठूला कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकार आएको छ । यसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ । पहिलाका सरकारको जस् तो तमसुक हु“दै न । कसै लाई पर्खिन र बहुमत जुटाउनु छै न । यति बे ला आवश्यक ऐ न नियम बनाएर दे शलाई व्यवस् िथत पार्नुपर्छ । सबै नागरिकको आयस्रो त र निजी चल अचल सम्पत्ति राज्यले जानकारी राख्नुपर्छ । मनासिव कारण फे लापारे पछि सर्बश्व हरणसहित जन्मकै द गनेर् राज्य व्यक्तिको सम्पत्तिबाट बे खबर छ । तीन तहका सरकार छन् । पद दिएर ने तालाई तिमाल्नका लागि मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको संरचना ल्याइएको छ । यो असाध्यै खर्चिलो व्यवस् था बने को छ । दे श वै दे शिक ऋणले चले को छ । कर्मचारीलाई जागिर खान्न भन्ने इच्छा दे खाउ“दा घर पठाउने को से ली राज्यस“ग छै न । छो ड्न खो जे को व्यक्तिले गतिलो शासन व्यवस् था कायम गर्छ भने र पत्याउनै सकिन्न । सरकार सक्रिय भए पनि कर्मचारी घर जान तयार भएका म्यादी छन् । ऊर्जावान शक्तिशाली सरकारका कामचलाउ कर्मचारीले दे शलाई सही दिसामा कुदाउन सक्दै नन् ।
सडकको किनारमा सुकुम्बासीले कब्जा गरे र बसे का छन् । बाटो फराकिलो पार्न खो ज्यो भने अवरो ध हुन्छ । समस् या समाधान गर्न उनीहरुलाई गास बासबाट बञ्चित गराउन पाइ“दै न । उनीहरुको पुख्यौर् ली सम्पत्ति छ कि छै न ? भएपछि कहा“ राखिएको छ पत्ता लगाउने राज्यस“ग कुनै संयन्त्र छै न । उनीहरुलाई वै कल्पिक व्यवस् था गरे र वा मुआब्जा दिएर सानेर् हो भने सबै सुकुम्बासी हो लान् भन्ने डर छ । त्यसै लखे ट्ने हो भने नागरिकलाई त्यसरी खान बस् नै नदिएर धपाउन पाइ“दै न । यसरी ठूला–ठूला विकास यो जनाहरु अलपत्र छन् । यो सब सिष्टम नबनाएरै हो  ।
सार्वजनिक पद धारण गर्नुपूर्व सम्पत्ति विवरण राज्यले मागे को हुन्छ । त्यो गो प्य सिलबन्दी कसै ले खो ल्दै न । राज्यले चाह्यो भने हे र्न सक्छ । हे र्न दिनुपर्छ । कसको जमिन कति छ इन्टरने टमा हे र्न पाउनुपर्छ । अनि पो को सुकुम्बँसी को हुकुमबासी भने र चिन्न सजिलो हुन्छ । ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा लगाएर चर्चा कमाउने र तर्साउने , भित्र भित्रै कुरा मिलाएर असुल्ने काम भएको छ । लामो समयको खर्चिलो अनुसन्धानले खो दा पहाड निकला चुहा बनाइदिने काम गरे को छ । अख्तियार तर्साउने निकाय बने को छ । उल्टो निर्माण हु“दै गरे को काम कसै को चुक्लीका आधारमा रो किदिन्छ । विकासमा अबरो ध सिर्जना गरे को छ । अदालत पनि बे नामे र आधारविहीन कसै को रिपो र्टका कारण काम रो कको आदे श दिन्छ । यसरी राज्य संयन्त्रबाटै बदमासी भएको छ । जनताको नजरमा दे श विकासमा अवरो ध गनेर् निकाय अदालत र अख्तियार बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक व्यक्ति र तिनको सम्पत्ति राज्यले जानकारीमा राखे पछि मात्रै यस् ता समस् या निराकरण हुन्छन् ।
Previous: बजारमा म्याद गुज्रेका सामग्रीको बिगबिगी
Next: कहाँबाट शुरु गर्ने समृद्धिको यात्रा ?